राशिफल – Hot Post News
एका बिहानै आज मंगलबार गणेश भगवानको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारिवारिक भेटघाटको समय छ । विशेष व्यक्तित्वलाई भेट्ने मौका आउला । प्रतिष्ठित कामले आत्म–विश्वास बढाउनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ । सहयोगीहरूले सकेको सहयोग गर्नेछन् । शुभचिन्तकको दृष्टि पर्नाले ताकेको काममा सफलता आर्जन हुनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन् । उचित काममा सही निर्णय लिन सकिने छ । आजका लागि शुभअङ्क : ५ र शुभरङ्ग : हलुका रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ अं अङ्गारकाय नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या : १० पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) –सजग र सतर्क भई काम गर्नसके आजको दिन पनि लाभकारी बन्न सक्छ । अरुको पछि लाग्नु भन्दा पनि आफ्नै सुझबुझ र परिश्रमको भर पर्नु राम्रो हुन्छ । बिग्रन लागेको कामबाट पनि धेरथोर लाभ नै मिल्नेछ । अर
आज सोमबार एका बिहानै भगवान शिबको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – क्रोध, प्रतिशोध, रिसराग र उत्तेजना माथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ । निर्णय सार्थक हुनेछ । मित्रवर्गबाट सोचेजस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ । प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापबाट लाभ मिल्नेछ । आम्दानीमा कमी आउने छैन, मनमा कताकता केही कमी भएझैं लागे पनि समग्रमा आजको समय लाभकारी नै हुनेछ । पारिवारिक जीवन र प्रणय सम्बन्धमा पनि सकारात्मकता नै देखिन्छ । आजका लागि शुभअङ्क : १ र शुभरङ्ग : गुलाबी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ गं गणपतये नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या : २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – धार्मिक, सामाजिक महत्वको क्षेत्रको भ्रमण हुनसक्छ । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ । पशुचौपायाबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । दौड
‏मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)गैर सरकारि सस्था तथा बिदेशि लगानिबाट सञ्चालित सस्थाहरुमा सहभागि भई काम गर्ने अवसर आउँनेछ । लामो यात्राको अभिक सम्भावना रहेको छ भने बिदेशी बस्तुको व्यापार व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार खर्च बढ्न सक्छ ध्यान लिनुहोला । पढाई लेखाईमा सफलता प्राप्त गर्न अलि बढिनै समय लगानि गर्नुपर्नेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो)कामगर्ने सवालमा होसियार रहनुहोला काम बिगार्ने तथा तपाईको नकारात्मक सोच्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । आम्दानि हुँने ठाउँमा सत्रुका आँखा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । परिश्रको फल अरुलेनै हत्याउँन कोषिस गर्नेछन् । अध्ययनमा मन जानेछैन भने नतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । दाजुभाईहरुको नराम्रा सल्लाह मान्दा काम बिग्रनेछ भने भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला । मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा)परिवारमा सबैसँ
आज २०७६ मंसिर १९ गते बिहीबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष - सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। आगन्तुकहरूको उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ। कामले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। पछिका लागि कर्मफल सञ्चय गर्ने समय छ। मेहनतले अवसर दिलाउनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ। बृष - नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने मनग्य धन आर्जन हुनेछ। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूल
Dec42019 by onlinenewsNo Comments
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – साजेदारी कार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्नाले ईष्ट मित्रको साथ मिल्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । कलाकौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने छ । नयाँ कार्यको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – मान्यजन तथा पारिवारीक साथसहयोगमा केहि दुरताको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु राम्रो रहनेछ । बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा भने राम्रो समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । सम्पादित कार्यहरुका क्षेत्रमा सामान्य झन्झट आई पर्नेछ । मीथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – नसोचेका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्धि भएता पनि साथिभाई हरु टाडिएको अनुभव
Dec12019 by onlinenewsNo Comments
आजदेखि सूर्य मंगल राशिमा बस्ने यो दुर्लभ योग, यी राशी हुनेछन् मालामाल !
(पूर्ण चन्द्र र अमवास्य कुण्डली ) मा बसेको हुन्छ । भूकम्प र राजनीतिक परिवर्तन भविष्यवाणीको सामाजिक परम्परा सूर्यको राशि परिवर्तनका आधारमा गर्ने पुरानो शताब्दीयौं देखिको तथ्य छ । तपाईं विभिन्न भाषाहरूमा यस्ता ज्योतिषीय भविष्यवाणीहरू पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ ।तपाईंको राशिको प्रभावमा तपाईको राशिको प्रभाव हेर्नुहोस् । मेष राशिमा सूर्यले चौथो चरणमा प्रवेश गर्दैछ। यो यात्रा तपाँइको लागि लाभदायक हुनेछ । यस समयमा तपाईंले पारिवारिक समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा प्रगति र फाइदाहरू उपलब्ध हुनेछन्। यो परिवर्तन विद्यार्थीहरूको लागि फाइदाजनक साबित हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा क्षेत्र राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। आफ्नो जीवनसाथिको स्वास्थ्यको हेरचाहमा ध्यान दिनुहोस । कन्या राशिलाई होईन यि राशिलाई दिदैछ चन्द्रमाले साथ, मेषः आर्थिक र व्यावसायिक परिप्रेक्ष्यबाट लाभदायक छ। उपहारहरू साथी र
कुन उमेरमा चम्किन्छ तपाईको भाग्य हेर्नुहोस ?
हामी सबैले आफ्नो-आफ्नो भाग्य बोकेर आएका हुन्छौँ । मानिसहरुले पाउने सुख, दुख, सम्पत्ति, विपत्ति सबै भाग्यले नै निर्धारण गर्ने गर्दछ ।भनिन्छ, दुख पछि सुख अवश्य आउँछ । त्यसकारण सबै मानिसहरुको भाग्यमा सुख, दुख पक्कै छ । फरक यत्ति हो, मानिसहरुले के लाई सुख सम्झिन्छन् र के लाई सुख सम्झन्छन् । हामी सबै हाम्रो राम्रो दिन कहिले आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउन आतुर हुन्छौँ ।हाम्रो राम्रो समय कहिले आउँछ वा हामीसँग कहिले निकै धेरै पैसा हुन्छ आदि इत्यादि । यी यावत् प्रश्नहरुको उत्तर भृगु संहितामा बताईएको हुन्छ । भृगु संहिता एउटा यस्तो ग्रन्थ हो जसमा ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु पाइने गर्दछ । यो ग्रन्थमा मानिसहरुको राशी अनुसार भाग्योदयको कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिइएको छ ।राशीअनुसार मानिसहरुको भाग्योदय हुने उमेरहरु यस प्रकारका छन्ः १. मेष राशीः- मेष राशी भएका मानिसहरुको भाग्योदय उनीहर
मंसिर ८ देखि १४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस
मेष – व्यवसायमा राम्रो आम्दानी हुनेछ । सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रतिर व्यस्तता बढ्ने तथा पदीय प्रशंसा मिल्नेछ । लगानीमा राम्रो फाइदा हुनाले आर्थिक भार कम हुनेछ । सवारीसाधनको सुख मिल्ने तथा कृषि व्यवसायमा राम्रो आम्दानी हुनेछ । आफन्त भेटघाट एवं यात्राको सुख मिल्नेछ । पारीवारिक सहयोग मिल्नाले पुराना काम बन्नेछन् । प्रेममा प्रगति एवं वैवाहिक जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्ति हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने विवादमा परिन सकिने, खर्चले तनाव हुने एवं यात्रामा सामान्य झन्झट हुन सक्नेछ । वृष – धार्मिक यात्रा हुनेछ । लामो यात्राको सुख मिल्ने एवं पारीवारिक भेटघाट रहनेछ । सन्तानको सुख मिल्ने एवं वैदेशिक सहायता आउनेछ । विदेशबाट फाइदा एवम आफन्तजनको सहयोगमा राम्रो कामको योजना बन्नेछ । खानपिन एवं सुखसयलमा खर्च बढ्ने तथा विलासितामा सामान्य खर्च हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा भने राम्रो प्रगति देखिन्छ । मिथुन – साताको
Nov222019 by onlinenewsNo Comments
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – मुखमा सरस्वतीको बास भएको दिन हो, त्यसैले महत्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ । आजको चिन्तन र उपायले काम गर्नसक्छ । आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन् । मानसम्मानमा बृद्धि हुनेछ । बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । प्रेम र प्रणयतर्फ आकर्षण हुनसक्छ । प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा विजय मिल्नेछ । आजका लागि शुभअङ्क : १ र शुभरङ्ग : हलुका नीलो वा हरियो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ हयग्रीवाय नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – एकोहोरो र जिद्दीपना त्याग्नु राम्रो हुनेछ । छरछिमेकमा भएका असमझदारीको सुलह हुनेछ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्र एवं मित्रवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ । बन्दव्यापारमा सोचेजस्तै
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – सामान्य आर्थिक तनाबको सामना गर्नुपर्ला । कार्यसम्पादनमा सामान्य ढिलाईको योेग रहेकोछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । वाणिका कारण सामान्य वादविवादको सम्भाबना रहनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । पारिवारीक झमेलाले सताउन सक्नेछ । बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । आफन्तजनहरुको साथ सहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय मध्यम रहनेछ । सामान्य यात्रा पश्चात मनग्य आम्दानी प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य शुख प्राप्त रहने दिन रहेकोछ मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – स्वास्थका कारण कार्यक्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु बाटँ टाढा भएको